प्रहरी नै अपराध कर्ममा ! १ वर्षमा २ डीएसपीसहित ३७७ को जागिर चैट — Paschimnews.com News From Nepal
प्रहरी नै अपराध कर्ममा ! १ वर्षमा २ डीएसपीसहित ३७७ को जागिर चैट
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/३/११ गते
अपराध नियन्त्रण र आमजनताको सुरक्षामा खटिने प्रहरी नै विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु नौलो कुरा होइन् । तर, विभिन्न समयमा लाग्ने यस्तो प्रकारको आरोपबाट प्रहरी संगठन अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।
यसको पछिल्लो उदाहरण २ दिनयताका घटनालाई हेरे पुग्छ । २ दिनमा ३ जना प्रहरी नै अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् । बुधबार हुण्डी कारोबारीसँग १० लाख रुपैयाँ असुलेको अभियोमा महानरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी हवाल्दार धीरेन विष्ट र प्रहरी प्रधान कार्यालयको २ नम्बर गणमा कार्यरत प्रहरी जवान विक्रम चन्द पक्राउ परे ।
त्यसरी नै आज मात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) रुद्र शाहीलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीमाथि बुधबार पेप्सिकोलाबाट पक्राउ परेका केही अभियुक्तसँँगको कनेक्सन रहेको खुलासा भएको छ ।
उनीहरूको साथबाट ब्यूरोको टोलीले औषधिजन्य लागुऔषध कोरेक्स बरामद गरेको थियो । ब्यूरोको टोलीले प्रहरी निरीक्षक शाहीमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । उसो त यसघि समेत प्रहरी सुन तस्करीदेखि विभिन्न अपराधिक घटनामा मुछिँदै आएका छन् ।
१ वर्षमा २ हजारभन्दा बढी कारबाहीमा
प्रहरी प्रधानकार्यालयको तथ्यांकअनुसार यसरी प्रहरी आचरणविरुद्ध काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू १ वर्षमा २ हजार ५ सय ३२ जना कारबाहीमा परेका छन् । यसरी कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रहरी जवान छन् ।
त्यस्तै, कारबाहीमा पर्नेमा अन्य प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मका छन् । प्रहरी आचरणविरुद्ध काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउनेदेखि बढुवा रोक्का गर्ने, पद घटुवा गर्नेसम्मका कारबाही गरिएकाे प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।
तथ्याङ्कअनुसार १ वर्षमा कुल २ जना डीएसपीसहित ३ सय ७७ जना प्रहरी कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाइएको छ । त्यसरी नै अन्यको हकमा बढुवा रोक्का गर्ने, पद घटुवा र चेतावनी दिनेसम्मका काम भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) निरजबहादुर शाहीको भनाइ छ ।